Dhibaatooyinka Soomaaliya – Weli Ma Dhammaan! - MSF Gudaha Soomaaliya- Helitaanka daryeel Caafimaad
Bukaannada ayaa rabshad, barokac iyo gaajo joogto ah oo jira ku sheegey warbixin cusub oo MSF ay soo saartey
Febraayo 13, 2013
Nayroobi/Amsterdam. Warbixin ay maanta soo saartey, Médecins Sans Frontières (MSF) ayaa muujisey in rabshad, barokac iyo cunto yaraan ay yihiin waxyaabaha ugu waaweyn ee la xiriira saaxada bani’aadamnimada ee Soomaaliya. warbixinta, oo loo bixiyey “Maqla hadalkeenna,” waxaa ay wax ka soo qaadaneysaa markhaati-kacyo ay bixiyeen in ka badan 800 bukaano Soomaali ah oo yimid tas-hiilaadka caafimaadka ay MSF ku leedahay Soomaaliya iyo degaanka xuduudda ee Itoobiya. Bukaannada ayaa tilmaamaya jiritaanka baylahsanaan badan iyo baahiyo joogto ah oo la xiriira nolosha aasaasiga ah sida cunto, daryeel caafimaad iyo ka nabadgelidda rabshad.
“Iyada oo dowladda Soomaaliya iyo bulshada caalamku ay eegayaan mustaqbal ifaya oo Soomaaliya yeelato iyada oo diiradda la saarayo dhinacyada deggaanshaha iyo horumarka, haddana ma halmaami karno in kumanaan qof ay weli haysato rabshad aad u ba’an ayna u baahan yihiin gargaar degdeg ah oo nolol lagu badbaadiyo,” ayaa uu yiri Joe Belliveau oo ah Maareeyaha Hawlgallada.
In ka badan kalabar shakhsiyaadka la wareystey waxaa ay sheegeen in guryahooda laga soo barokiciyey iyada oo ku dhowaad nus ka mid ah ay xuseen rabshad iyo baqdin weerar la xiriirta, iyo saddex-meelood meel oo xusey cunto yaraan, in ay yihiin sababaha ugu waaweyn ee barokacooda.
“Ammaan darro, cunto la’aant, bani’aadamnimo-darro, xorriyada la’aan iyo kala maqnaanshaha qoyska ayaa ah waxyaabaha ugu adag nolosha. Inta aan noolahay waxaa la i barokiciyey wax ka badan 10 jeer. Ninkeyga waxaa lagu diley weerar la soo qaadey waxaana laba ka mid ah carruurteyda u dhinteen cunto la’aan. Haweeney, 25 sano jir ah, ee Reer Gobolka Jubbada Hoose ah
Warbixintu waxaa ay xoogga saartey in ay tahay in gargaarka bani’aadamnimad mudnaan lagu siiyo qaybo ballaaran oo koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ah iyo in uu ka madax-bannanaado agandayaasha siyaasadda.
MSF waxaa ay si joogto ah uga shaqeyneysey Soomaaliya tan iyo 1991, oo dowladna ama hay’adna kama qaadato maaliyad ay ku fuliso barnaamijyadeeda Soomaaliya. in kasta oo waxqabadyada la yareeyey labadii sano ee la soo dhaafey taas oo ku xirneyn ammaan-darro iyo weerarro lagu qaadey shaqaalaha MSF, haddana MSF waxaa ay sii waddaa bixinta daryeel caafimaad oo nafo lagu badbaadiyo oo ay siiso boqollaal kun oo Soomaali ah oo ku kala nool toban gobol oo dalka ka mid ah, iyo sidoo kale dalalka deriska la ah ee Kenya iyo Itoobiya. 13kii Oktoobar 2011 ayaa laba shaqaalaha MSF ka mid ah, Montserrat Serra iyo Blanca Thiebaut, lagu afduubey xerada qaxootiga ee Dhadhaab ee ku taalla Kenya. MSF waxaa ay aaminsan tahay in labada shaqaalaheeda ka tirsan lagu hayo Soomaaliya waxaana ay codsaneysaa in shuruud la’aan lagu sii daayo.
Warbixinta oo kaamil ah hoos ka akhrisa…..SOMALI 7.3.13 – small
Tags: Kismayo, Mogadishu, MSF, Somalia, South Central Somalia